Mavhesi eBhaibheri Pane Zvepamusoro: Ushingi -> Hunhu hwakanaka
Hunhu hwakanaka: [Ushingi]
 Zvino, Tenzi chitarisai kutyisidzira kwavo, mupe kuti varanda venyu vataure shoko renyu nechivindi chaicho imi makasimudza ruoko rwenyu kuti rurape uye muitewo kuti zviratidzo nezvishamiso zviitwe nezita romuranda wenyu mutsvene, Jesu.” Pavakapedza kunamata nzvimbo yavakanga vakaungana yakandengendeka vakabva vazadzwa vose naMweya Mutsvene vakataura izwi raMwari nechivindi.
2 VaKorinte 3:12
Zvatiine chitarisiro chakadaro, tine chivindi.
Pauro naBhanabhasi vakataura nokushinga vachiti, “Shoko raMwari raifanira kutanga rataurirwa kwamuri. Zvino zvamariramba mukaona kuti hamukodzeri upenyu usingaperi, chinzwai, isu tava kuenda kune vechirudzi.
Aipota achipinda musinagogu; kwemwedzi mitatu aitaura asingatyi achidzidzisa zvokuti vabvume zvoumambo hwaMwari.
Nezvo kunyange zvangu, muna Kristu, ndiine simba, rokukuudza zvokuita,
Akatangisa kutaura nechivindi musinagogu. Pirisira naAkwira pavakamunzwa vakamutora vakamutsanangurira nzira dzaMwari nemazvo chaimo.
kwakauya Josefi weArimatia, aiva mumwe wamakurukota airemekedzwa. Iyewo pachake aimirira umambo hwaMwari. Akatsunga mwoyo ndokuenda kuna Pirato, akamukumbira chitunha chaJesu.
achiparidza umambo hwaMwari achidzidzisa zvaTenzi Jesu Kristu zviri pachena asina anomudzivisa.
 Zvino, Tenzi chitarisai kutyisidzira kwavo, mupe kuti varanda venyu vataure shoko renyu nechivindi chaicho imi makasimudza ruoko rwenyu kuti rurape uye muitewo kuti zviratidzo nezvishamiso zviitwe nezita romuranda wenyu mutsvene, Jesu.”
Akaipa anotiza pasina anomudzingirira asi vakarurama vane chivindi kunge shumba.
 Abhurahamu akaswedera pana Tenzi akati, “Ko muchaparadza vakarurama pamwechete navakaipa here? Ngatiti muguta imomo mune vakarurama vanokwana makumi mashanu hamungarinzwire tsitsi here pamusana pemakumi mashanu arimo muchibva marega kuriparadza? Regai zvenyu kuita zvakadaro kuuraya vakarurama pamwechete navakaipa muchienzanisa vakarurama navakaipa. Regai zvenyu kumbodaro ko iye mutongi wepasi pose angatadze here kuita zvakarurama?” Tenzi akati, “Kana ndikawana muSodhomu muine vanhu vakarurama vanokwana makumi mashanu ndichanzwira tsitsi guta rose pamusana pavakarurama ivavo.” Abhurahamu akati, “Kunyange zvangu ndiri guruva nedota, ndatsunga kutaura kwamuri Tenzi wangu. Ngatitii poperevedza navanhu vashanu kuti vakwane makumi mashanu avakarurama, mungaparadze here guta rose pamusana pavashanu vanenge vashayikwa?” Mwari akati, “Handingariparadze kana ndikawana muine makumi mana navashanu ivavo.” Abhurahamu akataurazve achiti, “Zvimwe muchawanikwa muine makumi mana.” Mwari akati, “Handingazviite nokuda kwamakumi mana iwayo.” Abhurahamu akati, “Tenzi wangu, regai zvenyu kunditsamwira kana ndikataurazve. Zvimwe muchawanikwa muine makumi matatu?” Mwari akati, “Handingazviite kana ndikawana muine makumi matatu iwayo.” Abhurahamu akati, “Tenzi wangu, ndava kungoramba ndichikunyaudzai. Zvimwe muchawanikwa muine makumi maviri avakarurama.” Mwari akati, “Handingariparadze nokuda kwamakumi maviri iwayo.” Abhurahamu akati, “Regai zvenyu kunditsamwira Tenzi wangu kana ndikataurazve kamwechete koga. Zvimwe muchawanikwa muine gumi rimwechete ravanhu.” Mwari akati, “Handingariparadze nokuda kwegumi iroro.”
Pandakachema makandidavira, mukandisimbaradza.
anotipa kuti tive nechivindi nechivimbo chokusvika pana Mwari nokuda kwechitendero chedu maari.
Mukadzi akamupindura achiti, “Handina murume ini.” Jesu akati kwaari, “Wataura zvakanaka kuti, ‘Handina murume,’
Saizvozvo hama dzangu, zvatiine chivimbo chokuti tichapinda munzvimbo inoeresesa nokuda kweropa raJesu
Naizvozvo tinogona kutaura nemwoyo wose tichiti, “Mwari ndiye muyamuri wangu. Handimbotyi munhu angandiitei?”
 Ndikumbirireiwo ini kuti ndiwaniswe mashoko pandinenge ndave kuda kutaura kuti ndiparidze nechivindi chakavandika chiya chezveShoko Rakanaka randiri nhume yaro iri muusungwa kuti ndiriparidze ndakashinga sezvandinofanira kuita.
Pavakaona chivindi chaPita naJohani uye vachiona kuti vanhu vasina kudzidza, vachingova vanhuwo zvavo, vakashamiswa. Vakazviona kuti vakambenge vaina Jesu.
1 Timoti 3:13
Avo vanoita basa ravo zvakanaka samadhikoni vanozviwanira zita rakanaka uye chivimbo chikuru muchitendero chavo muna Kristu Jesu.
1 VaTesaronika 2:2
Kunyange zvedu takambenge tatambudzika uye tanyadziswa kuFiripi, sokuziva kwenyu, takaita chivindi muna Mwari wedu; takakuparidzai Shoko Rakanaka raMwari pakati pavanhu vairwisana zvikuru nezvataiita.
Chido changu nechitarisiro changu ndechokuti ndirege kumbofa ndakanyara asi ndive nechivindi chizere zvino uye samazuva ose Kristu acharumbidzwa mumuviri wangu noupenyu hwangu kana norufu rwangu
nokuti Mwari haana kutipa mweya woumbwende asi mweya wesimba norudo nowokuzvibata.
1 VaKorinte 16:13
Rindirai, makasimba nacho chitendero, ivai nechivindi makagwinya.
Mukutya Tenzi mune chivimbo chakasimba, kana vana vakewo vanowana kwokupotera.
Tarisira muna TENZI, simba ushinge mwoyo. Tarisira muna TENZI.
Ndinodaro nokuti handinyari neShoko Rakanaka nokuti iro isimba raMwari rokuponesa munhu wose ane chitendero zvichitangisira kuvaJudha kozouya vaGiriki
1 Makoronike 28:20
Dhavhidhi akati kumwanakomana wake Soromoni, “Shinga utsunge mwoyo uzviite. Usatye kana kupazamiswa musoro nokuti Tenzi Mwari, iye Mwari wangu anewe. Haambokusiya uri woga kana kukurega uchikundikana kusvikira basa rose rinofanira kuitwa remba yaTenzi rapera.
1 VaKorinte 15:58
Naizvozvo, hama dzangu dzadiwa, rambai makasimba musingatsukutsiki musingasiyani kwazvo nebasa raTenzi tichiziva kuti muna Tenzi basa renyu harishai maturo.
Pokupedzisira itosimbai muna Tenzi uye nokusimbarara kwesimba rake.
“Rega zvako kutya nokuti hausi kuzombonyara, rega zvako kutenderedzwa musoro nazvo nokuti hausi kuzombonyadziswa pamusana pokuti zvakakunyadzisa uchiri mudiki, uchatozvikanganwa uye kushorwa kwako pamusana pouchirikadzi hausi kuzombokuyeuka;
Ndinokusiirai rugare, ndinokupai rugare rwangu. Handikupei sokupa kunoita nyika. Mwoyo yenyu ngairege kutambudzika uye ngairege kutya.
Jesu paakazvinzwa, akati kumutungamiri wesinagogu, “Regai henyu kutya ingotendai bedzi.”
Mune chii nechii zvacho musatye mhandu dzenyu. Ichi chinobva chava chiratidzo chokuparadzwa kwavo asi chiri chiratidzo chokununurwa kwenyu chinobva kuna Mwari.
asi hapana chavari kutaura kwaari, zvinoreva here kuti vakuru vakuru vava kunyatsoziva kuti uyu ndiye Mesia.
Asi Pita navapositori vakapindura vachiti, “Tinofanira kuteerera Mwari panokuteerera vanhu.
Chako iwe chete kushinga mwoyo nokuva nomwoyo wechivindi chaiwo, uchenjerere kuita zvose maererano nomutemo wawakaudzwa naMosesi muranda wangu. Usawane chimwe chaunotsaudzira pauri uchienda uku kana uku, kuti unyatsobudirira kwose kwaunoenda.
Ndaita kuti uve nomusoro wakaoma kuti papata chaizvo seibwe romusarasara. Rega kumbovatya kana kuzeza mutarisiro wavo nokuti imba yemhandupandu dzavanhu.”
achiparidza akashinga muzita raTenzi. Akataura achipikisana nevechiGiriki asi ivo vaitotsvaka zvokumuuraya.
Ndini Pauro naTimoti varanda vaKristu Jesu ndinokunyorerai imi mose vatsvene muna Kristu Jesu vari kuFiripi namabhishopi namadhikoni.
1 Timoti 3:1
Shoko iri nderechokwadi rinoti kana munhu akavavarira kuva mubhishopi ari kuda basa rakakosha kwazvo.
1 VaKorinte 3:12
Zvino mumwe anogona kuvaka hwaro ihwohwo nendarama, mumwe nesirivha mumwe namatombo anokosha mumwewo namapango mumwe nouswa mumwe namashanga.
Pamusana pokuti mutemo mumvuri chete wezvinhu zvakanaka zvichauya, panze pokuva nezvinhu zvacho chaizvo, kuchingova kupira zvibayiro zvimwechetezvo zvinoramba zvichingopirwa gore negore, haumbofa wakaruramisa vanamati.